sudhir, Author at Everest Uncensored
गुड मर्निंग सर ! हाउ वाज योर ट्रिप ? भनेर सफा सुग्घर कपडामा सजिएकि हसिली फरासिली युवतीले सोध्दा होटलमा बस्न आउने बिदेशी वा स्वदेशी पाहुनाहरु आत्मीय भावनाको आभासका साथ खुशी हुन्छन । पाँच तारे होटलदेखि ताराबिहिन होटलहरु लगायत पर्यटकीय क्षेत्रका फास्ट फुडहरुले आफ्ना अतिथिहरु आकर्षित गर्नका लागि कर्मचारीहरुको यो बाह्य कलालाई निकै प्रश्रय दिएको पाइन्छ । भवनको सजावट र सफासुग्घर तथा टाईशुटमा जमेका कर्मचारीहरुको हाउभाउ देख्दा जो कसैलाई पनि उक्त स्थान आकर्षक लाग्न सक्छ ।
LeaveaComment on टाईसुटभित्र अल्झिएको दुःख
LeaveaComment on फेवाताल भर्सेस् नैनीताल